5 Qalabyada Cimilada ah waxay ku talineysaa qof kasta oo bilawga ah
Sidaas ayaad billaabatay bartaada. Hambalyo! Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad la noolaato,ama waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad kula wadaagto riyooyinka fasaxii ugu dambeeyay ee saaxiibbada iyoqoyska. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo badan oo aad blogka uga dhigi karto mid cajiib ah oo xirfad leh.Julia Vashneva, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Semt Adeegyada Dijital, waxay ku talinaysaa qalabtaasi waa lagamamaarmaan u ah qof kasta oo doonaya inuu bilaabo barta.
Spellcheck waa fiican, laakiin mar walba sax ma aha. Waxay ku xiran tahay boggaaga blogging(Blogger, Wordpress, iwm.), Waxaa laga yaabaa inaadan haysanin wax xeel dheer. Iyo xataahaddii aad u maleyneyso in qoraalkaaga iyo naxwahaaga ay la socdaan dunidii wax bartay, akhristayaasha ayaaogow wax kasta oo aan fiicnayn. Xaaladdan, waxaan ku talinaynaa naxwe ahaan. Grammarlywaa plugin bilaash ah, kaas oo loogu talagalay qoraal wax ku ool ah. Waxay si toos ah u baartaa dhammaanee qoristaada khaladaadka caanka ah iyo kuwa sare oo dabadeedna soo jeediya talooyin ku saabsan sida loo saxayo.
2. Sawir Sawireed
Waa inaad haysataa ilaha aad ka heli karto sawirro muuqaal ah oo lacag la'aan ah. Waxaan ku noolnahaybulsho aragti ah, iyo marka dadku akhriyaan internetka, waxay filayaan inay arkaan midabada iyosawiro..Haddii aad tagto waxyaabaha ugu horeeya ee aad ka heleyso Google, waxaad ku ordi doontaa khatarta ahiyaga oo si sharci-darro ah u soo gelinaya. Warka wanaagsani waa in ay jiraan goobo halkaa ka baxsan karoI caawi! File Morgue iyo Wikimedia Commons waa laba meelood oo aad ka soo dejisan kartosawirada bilaashka ah oo bilaash ah oo fasax la'aan ah oo sawir qaade ah
3. Jadwalka ama Qorshaha
Dadku waxay jecel yihiin boogaha si joogto ah loo casriyeeyay. Is-beddelada joogtada ahi waxay ka dhigan tahay in ka badan iyo ka badanakhristaha khaaska ah, taas oo micnaheedu yahay bandhigid iyo guusha aad blogka. Inta badankhabiiro waxay kugula talinayaan in ay cusbooneysiiyaan bartaada ugu yaraan saddex ama afar jeer toddobaadkii - laakiinHaddii aadan qorsheynin qorshooyinkaaga ka hor, waxaad ka fikiri doontaa fikradaha! QaarkoodBloggers waxay doorbidaan jadwalka kaltanka-dhaqameedka iyo kuwa kaleba inta ay kuwa kale yihiin kuwo wanaagsanfeylasha kumbuyuutarka. Si kastaba ha noqotee, hubi inaad meel u dhigan karto dhamaantoodqoristaada toddobaadyada soo socda si aanad ugu yaraan hoos ugu dhicin content!
4. Cilmi-baadhaha Kelmadaha
Ereyada, SEO, iyo tagsku waxay u egtahay sida mumbo-jumbo inay ujo-galayaasha cusub, laakiiniyaga oo baranaya waxay boodi karaan bartaada si ay ugu sareyso natiijooyinka mashiinka raadinta.Fikirka muhiimka ah ee ka dambeeya SEO (raadinta makiinada raadinta) ayaa soo xaadiraya taasereyada dadku waxay raadinayaan haddii ay raadinayaan bloggaaga. Tusaale ahaan,maqaalkani wuxuu lahaan doonaa ereyo muhiim ah sida "blogging," "optimization blog", iwm.Waa fikrad wanaagsan inaad ku hayso ereyadan soo noqnoqda maqaalkaaga si aad u raadisomashiinnada ayaa si fudud u heli kara. Inkastoo badi boggaga blogga ay ku jiraan habab loo heloku qor ereyada muhiimka ah, qalab sida Qorshaha Ku-Meel-Gaarka ah ee Google ayaa muujin kara inta badandadku waxay raadiyaan ereyada muhiimka ah maalin kasta, markaa waxaad ka heli kartaa kuwa ugu caansan.
mar kale dhinaca dhinaca teknolojiyada, qalabka falanqaynta sida Google Analytics ayaa sheegi doonaadiga imisa qof ayaa soo booqday blog-ka maanta, ama toddobaadkii hore, ama wax kasta. Sidoo kalewaxay muujineysaa sida akhristayaashu u heleen goobtaada iyo shuruudaha raadinta ay yihiin kuwa ugu caansan, adigaayaa sidoo kale baran karaa xifdiyadaha ay helayaan dareenka ugu badan. Inkastoo falanqeyntu yihiinquruxda caadiga ah ee barmaamijyada maanta, hubso inaad fahamto dhammaan hawlahaee qalabkan si aad ula socon kartid akhristahaaga oo aad baratid waxa ka dhigaya boggaaga.
Blogging noqon kartaa hiwaayadda aad u wanaagsan iyo xirfad faa'iido leh, laakiin la ordo blog,runtii, wuxuu u baahan yahay dadaal badan. Laga soo bilaabo waayo-aragnimada Sare , qalab sax ahwuxuu si weyn u yareeyn doonaa waqtiga barashada-iyo-qaladka si aad u sahlan inaad toos ugu tagto xagga sare Source .